श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने
१. काली, परी, माया, बेबी र मेरो महारानी भनेर बोलाउने । २.कुनै अन्य राम्री केटी संग तुलना गर्दै नगर्ने। बरु नराम्री केटीको फ़ोटो देखाएर यो भन्दा राम्री त तिमी छौ भनी मक्ख पार्ने।३. भूलेर पनी श्रीमतीका बाउआमाको नराम्रो पक्ष ननिकाल्दिने। सकेसम्म माईतीको कुकुर र भैसिको पनी भरपूर तारीफ गर्ने। ४.घर सफा, गर्ने, कपड़ा धुने, बजार जाने र खाना पकाउने। अफिसको लागी आफ्नो खाजा आफै पोको पार्ने**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **